Xariif Magaalo lama gaadi karo, Iyo Sheeko Xiiso Badan Oo Ku Dhacday Cali.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: April 9, 2016, 3:34 pm
Xariif Magaalo lama gaadi karo
Cali ayaa ka soo safray Gobolka ……. Isagoo wata mootadiisa, wuxuu ku leexday Magaalo ku dhow halki uu ku socday, wuxuu galay Baar weyn oo wada saarnaa, wuxuu dalbaday Koob shaah ah oo Caano Geel lagu cadeeyay.
Marki uu soo baxay ayuu arkay in Mootadiisi uu banaanka dhigtay la xaday. Wuxuu ku soo noqday gudaha baarki intuu Bistoolad la soo baxay ayuu laba xabo saqafka kore ku riday, wuxuuna si xoog ah u yiri, “I maqla dadkiina Koob Shaah oo kale ayaan dalbanayaa markaan dhameysto haddii aan la soo celin mootadeydi, Walaahi waxaan sameynayaa sidi aan magaalo Hebel ka sameeyay, mana jecli inaan sameeyo sidi magaalo hebel aan sameeyay laakiin dantaa igu kallifeysa”
Koob kale oo shaah ah ayaa loo keenay. Dadki gudaha fadhiyay waxaa ku dhacay naxdin iyo baqdin, waxayna u carareen banaanka. Marki uu shaahi labaad dhameystay ayuu banaanka u soo baxay mise mootadiisi waa la soo celiyay oo barteedi loo dhigay.
Kolki uu rabay inuu dhaqaaqo ayaa waxaa ka soo daba baxay ninki baarka gadayay, wuxuuna ku yiri, “Walaal ma ii sheegi kartaa wixi aad magaalo hebel ka sameysay marki sidan oo kale mootadi kaa xadeen?” Cali ayaa ugu jawaabay, “Waa iska lugeeyay! hadana waa iska lugeyn lahaa!!”
La wadaag Asxaabtaada ama ku tag-garee qofka aad taqaan oo sida ninkan u Booto badan
Talooyin Taabagal ah Iyo Shabakada Kobciye.com Oo Kuusoo Xushay Xikmadaha Toddobaadka..